CUDURADA DIGAAGGA: SHARAXAADDA, DAAWEYNTA IYO KA HORTAGGA - BEERAHA DIGAAGA
Maalmahan, digaagga digaaga waa ganacsi faa'iido leh.
Laakiin, sida xayawaanka oo dhan, digaagga ayaa sidoo kale u nugul cudurada kala duwan.
Dhibaatada ugu weyn ee ugu weyn ee horumarinta beeraha digaaga ayaa ah cudurada digaaga.
Mararka qaarkood waxaa dhacda in ay jiraan cuduro faafa oo aad u daran, taas oo ay sabab u tahay in aad jarjartid dhamaan xoolaha.
Beeraley kasta, xitaa bilowga, waa inuu ka warqabaa cuduro kala duwan iyo sida loo daweeyo.
Maqaalkan waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan cudurrada digaagga, astaamaha, ka hortagga cudurrada iyo daaweynta.
Waa maxay cudurada shimbiraha ee jira?
Shimbiraha waxay ku dhici karaan cuduro kala duwan. Waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: faafa, aan lays qaadsiin, iyo waliba daba-dheer.
Shimbiraha waxay weerari karaan dulinada kala duwan. Shimbiraha waxaa laga yaabaa in ay gubtaan, gubasho, cuduro kala duwan ama la'aanta fiitamiin.
Si looga hortago cudurka digaagga, waxaad u baahan tahay inaad fiiriso oo eegto.
Digaagga caadiga ah iyo kuwa caafimaad qaba waxay keenaan nolol aad u firfircoon, waxay qabaan cunto wanaagsan. Xayawaanka waa inay noqdaan kuwo aad u fiican oo siman. Waxay sidoo kale socdaan oo istaagaan.
Markaad eegto shimbirta, dareenka waa in la siiyaa arrimaha soo socda:
On maqaarka shimbir.
On neefta shimbir ah.
Dhaqdhaqaaqa lugaha, qoorta, baalasha.
On xubnaha dheefshiidka.
On cagaha shimbirta.
Haddii ay dhacdo in aad cudurka ku aragtay digaag kasta, markaa marka hore waxaad u baahan tahay inaad ka qaadato inta kale. Tan waxaa loo qabtaa si looga fogaado cudurka dadka oo idil.
Kadibna waxaad u baahan tahay inaad sameyso baaritaanka saxda ah iyo daaweyntiisa. Doorashada ugu fiican waxay noqon laheyd Qaado shimbirta dhakhtarka, laakiin haddii aysan jirin wax suurtagal ah, ka dibna wax walba sameeya.
Cudurada shimbiraha ayaa labadaba infekshin kara. La-qabsigu wuxuu keeni karaa geerida dhammaan daaqada. Xanuunada aan la isku haleyn karin ma ahan mid khatar ah, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin in la daweeyo.
Cudurrada infekshanka iyo kuwa aan la isku haleyn karin ayaa sidoo kale loo qaybiyaa qaybo kala duwan, oo aan hoos ku qeexno.
Maxaa khuseeya cudurada faafa?
Cudurada faafa ayaa ah kuwa ugu khatarta badan. Sababtoo ah xaqiiqda ah in ay burburin karaan dhamaan xoolahaaga.
Waxaa jira dhowr noocyada cudurrada faafa:
Cudurada oo leh xad-dhaaf ah infakshanka.
Iyo cudurrada keena cayayaanka kala duwan.
Waan ka wada hadli doonaa mid kasta oo ka hooseeya.
Waa maxay cudurada faafa?
Pseudochuma ama magac kale oo cudurka ah waa Newcastle
Cudurkaan waxaa lagu kala qaadaa dhibcaha hawada ka dhasha.
Calaamadaha cudurka waxaa ka mid ah: xaalad ba'an oo shimbir ah, dhaqdhaqaaq liita, neefsashada culus, dhibcaha dareeraha ah, shimbirta ayaa ku wareegsan caloosha.
Sida loo daaweeyo shimbir Cudurkaan, daaweyntu suurtagal maahan, sidaas darteedna ma aha goor dambe, waxaad u baahan tahay inaad kala soocdo shimbirta oo idil oo idil.
Ujeedooyinka loo yaqaan prophylactic, nadiifinta waa in lagu arkay qolka digaag digaag, feed waa la xaqiijin waa in la siiyaa, tallaal shimbiraha.
Xaaladdan oo kale, digaagga ayaa ka xanuunsada caloosha. Sidoo kale waxaa lagu gudbiyaa dhibco hawo leh. Badanaa shimbiraha qaangaarka ah ayaa saameynaya
Calaamadaha cudurka waxaa ka mid ah: xaalad ba'an oo shimbir ah, dhaqdhaqaaq xumo, cunto xumo, neefsashadu aad bay u badantahay. Digaagga sidoo kale waxay cabbaan biyo badan. Waxay sameeyaan calool-xumo iyo xayawaan maqaarka ah.
Sidee loo daaweeyaa cudur? Xaaladdan, cudurka waxaa lagu daaweeyaa antibiyootiko khaas ah. Antibiyootikada waxaa la qaataa irbado ama ku shubaa dhuunta.
Si looga hortago, tallaabooyinka soo socda ayaa la qaadaa: si loo sameeyo tan, ka saar shimbirta shimbirta ah, guriga hoyga si aad u qaaddo tallaabooyinka jeermiska.
Cudurkan waxaa sababa bakteeriyada Salmonella ee waxyeellada leh. Waxay loola jeedaa cudur aad u khatar ah oo waxyeeleeya dhammaan xubnaha gudaha ee shimbirta.
Cudurku wuxuu ku faafaa hawada. Ukumaha digaag xanuunsan lama cuni karo, maadaama aad naftaada u heli karto.
Bakteeriyada waxyeelada leh waxay u dhintaan inta lagu jiro daaweynta kulaylka.
Calaamadaha cudurka waxaa ka mid ah: waxaa jira daciifnimo shimbirta ah, neefsashada neefsashada, shimbirta si joogto ah u cabtaa biyaha, indhaha biyo, cunto xumo.
Sida loo daweeyo cudurka? Wixii daaweyn ah daawooyinka loo isticmaalo sida furazolidol ama streptomycin.
Sida qiyaas ka hortag ah, shimbir xanuunka waa la go'doomiyaa. La soco nadaafadda guriga. Waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo shimbiraha biyo leh kaneecada. Sidoo kale waa in la tallaalaa.
Cudurkani wuxuu ku fidaa dhammaan xubnaha gudaha ee digaagga.
Calaamadaha cudurkan waa sida soo socota: Miisaanka si deg deg ah sababtoo ah cunto xumo, daciifnimo, heerkulka jidhka, kor u kicida iyo kalagoysyadu waxay noqdaan kuwo barara, waxaana sidoo kale jira shaqo caloosha oo liita.
Daaweynta digaaga ayaa ka kooban antibiotics.
Si looga hortaggo waxaa ka mid ah: go'doominta tallaabooyinka digaaga iyo fayadhowrka jirran.
Asal ahaan, kaliya sanbabada ayaa la saameeyaa, marmarka qaarkoodna dhammaan xubnaha gudaha. Cudurkan waxaa u muuqda sababo nadaafadeed oo liita ee guriga hargabka. Gudbinta cudurku wuxuu marayaa hawada.
Calaamadaha cudurka waxaa ka mid ah: dhaqdhaqaaq xumo iyo miisaan lumis. Nuun la'aan. Cilladaha cillada iyo maqaaruhu way yaraadeen.
Waa suurtagal in la daweeyo cudurka, sidaa darteed shimbirta jiran waa la dilay.
Si looga hortago cudurka, waxay nadiifiyaan coop.
Kani waa cudur halis ah. Laakiin waxay ku dhici kartaa qaab dabiici ah. Ku gudbinta kaliya ee la xiriirta shimbiraha, ama ka yaryar yar yar.
Calaamadaha cudurku waa sida soo socota: Miisaanka luminta iyo muuqaalka daciifnimada, way adkaanaysaa in la liqo cuntada, muuqaalka dhibcaha casaanka ee maqaarka.
Daawee, laga yaabee, kaliya marxaladaha hore ee muujinta cudurka. Dhibaatooyinka waa in lagu miiray xal furatsilina waxaana sidoo kale lagu daaweeyaa antibiyootiko.
Sida qiyaasta ka hortagga ah, tallaabooyinka nadaafadda ee hoyga hen waxay ku habboon yihiin, iyo sidoo kale jeexista shimbiraha.
Ornithosis ama cudur halis ah
Cudurku wuxuu ka mid yahay kuwa ugu khatarsan, wuxuu saameeyaa neefsashada, xubnaha dheef-shiidka, iyo sidoo kale nidaamka dareenka shimbirta.
Caabuqa wuxuu ku dhacaa hawada ama daroogada.
Calaamadaha cudurka waxaa lagu arki karaa calaamadaha soo socda: ma jiraan cunto yaryar oo shimbirta ah, iyo, markaa, miisaan khasaare ah. Neefsashada culus. Xajinta liistada, xabeeb sanka ah.
Antibiyootikada iyo dheellitirka kiniiniga kiriimiga ah ee biyaha ku jira ayaa ku habboon daaweynta waxtarka leh. Iyo in feed aad u baahan tahay inaad ku darto vitamiin badan.
Sida qiyaasta ka hortagga, tallaabooyinka nadaafadda ayaa ku haboon. Haddii shimbiraha jiran ay la kulmaan kuwa caafimaadka qaba, kuwa markaa caafimaad qaba waxay sidoo kale u baahan yihiin antibiotics laba maalmood. Waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo dhammaan hawlaha shaqada.
Cudurka waxaa lagu gartaa caabuqa xuddunta. Taasi waa sababta oo ah sababta ay tahay shimbir shimbir ah.
Astaamaha waxaa ka mid ah: muuqaalka daciifnimada, waxbarasho kasta oo u dhaw xuddunta. Shimbiraha ay saameeyeen cudurka, ku hay qashinka.
Antibiyootikada waxaa loo isticmaalaa daaweynta, xuddunta ay saameysey waxaa lagu daaweeyaa xal gaar ah.
Wixii ka hortag ah waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso oo aad nadiifiso guriga.
Cudurka waxaa lagu gartaa waxyeello nidaamka dareenka shimbirta, marmarna dhaawac u geysto xubnaha kale.
Astaamaha waxaa ka mid ah cunto xumo iyo miisaan, indho la'aan. Murqada
Daaweynta cudurkaan macquul maaha.
Sida qiyaasta ka hortagga, tallaalka digaagga waa in la fuliyaa. Adiga oo qaba cudurka waxaad u baahan tahay inaad ka qaaddo shimbirta jiran qof walba.
Colisepticaemia ama Colinfection
Cudurku wuxuu muujiyaa laftiga iyada oo loo marayo samaynta Escherichia coli. Wuxuu saameeyaa dhammaan xubnaha jirka ee shimbirta.
Cudurku waa mid halis ah. Sababta muuqaalka ayaa sabab u ah quudinta saboolka ah iyo shimbirta saboolka ah.
Astaamaha waxaa ka mid ah: Cunto xumo, lakulmo, heerkulka jidhka oo sarreeya, neefsashada liidata waa suurtogal xitaa xiiq, iyo muuqaalka harraad aad u weyn.
Si loo badbaadiyo shimbiraha dhimashada waxay isticmaali kartaa oo kaliya antibiotics.
Cabbiraadyada ka hortagga ah waxay ku dabaqaan cuntada caadiga ah ee digaaga, iyo sidoo kale inay raacaan xeerarka nadiifinta iyo dayactirka digaaga.
Cudurkani wuxuu saameeyaa kelyaha shimbirta. Caabuqa wuxuu dhacaa keliya marka la quudiyo.
Astaamaha waxaa ka mid ah arrimahan soo socda: Cunto xumo iyo miisaan lumis, saxaro dhiig ah, qallafsanaan, shanlayn iyo hilqado cad oo kor u kaca, iyo kobcinta carqaladda, garabka leexashada.
Waa lagama maarmaan in lagu daweeyo shimbir bukaan ah oo leh antibiotics, oo ku dar saliida kalluunka si ay u quudiso.
Sida qiyaas ka hortag ah, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo guriga, ku quudiyo cunto cusub, iyo sidoo kale si aan qoyaan lahayn guriga hoyga.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo beerista baradho iyadoo la isticmaalayo tiknoolijiyada Dutch.
Cudurkan faafa wuxuu u xun yahay nidaamka dareenka.
Aad bay halis u tahay oo waxay keentaa dhimashada shimbirta. Isku gudbintu waxay ku dhacdaa hawada, iyada oo loo marayo quudinta, iyo sidoo kale iyada oo loo marayo qashin.
Calaamadaha cudurku waa: dhaqdhaqaaq la'aanta iyo horumarinta naafaynta, muruqa muruqyada iyo saxaro dabacsan.
Nasiib darro, waa suurtagal in la daaweeyo cudurka.
Si looga hortago cudurka waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso nadaafadda, nafaqada iyo digaaga.
Cudurkan, hawo-mareenka ayaa la xanuunsanaya, cudurku wuxuu ku faafaa hawada.
Astaamaha waxaa ka mid ah neefsashada xun ee leh hargab, xab qarsoon oo laga soo sanqo sanka, mararka qaarkood waxaa jiri kara qalal.
Marka la daaweynayo cudurka, terramycin waxaa loo isticmaalaa. Laakiin ha iska daayo antibiotics.
Sida qiyaasta ka hortagga ah, cawska cagaaran oo lagu daro fitamiinada ayaa loo isticmaalaa.
Cudurku waxa uu muujiyaa xanuunada mareenka sare ee neef-mareenka ee shimbiraha. Waxaa lagu kala qaadaa hawada.
Astaamaha waa sida soo socota: neefta xun ee leh xiiq, qufaca dhiigga, marwalba oo dhoobo furan, mararka qaarkood muuqaalka gariirka iyo cabsida iftiinka.
Sida daaweynta, antibiyootik aerosol waa ku habboon yihiin, iyo sidoo kale xal of kaneecada.
Qiyaas ahaan ka hortag, waxaa lagama maarmaan ah in la tallaalo shimbiraha.
Hemophillosis ama sanka oo dareeraya shimbir
Cudurka waxaa lagu gartaa maqaarka maskaxda sare ee neefta, sameynta habdhaqanka loo yaqaan rhinitis.
Sababaha keena la'aanta fitamiinada ee cuntada.
Astaamaha waxaa ka mid ah miisaan lumis, xabeeb sanka ah, iyo neefta gaaban.
Si loo daweeyo cudur, xal jeermiska ayaa lagu daraa biyaha.
Si looga hortago, waxaad u baahan tahay inaad diiriso digaag digaag, nadiifi oo si habboon u quudiso shimbirta.
Cudurkani wuxuu saameeyaa xubnaha neefsashada iyo sidoo kale xiidmaha.
Cudurkaasi aad ayuu halis u yahay oo wuxuu keenaa dhimasho. Cudurka waxaa lagu kala qaadaa hawada.
Astaamaha waxaa ka mid ah: daciifka digaaga iyo lakariga, shubanka, qandhada sare, hindhisada neefsashada, wax soo saarka ukumaha, shanlada iyo xayawaanka midab buluug ah.
Daaweynta cudurkan waa mid aan macquul ahayn.
Tallaabooyin ka hortag ah, nadiifinta iyo amarka guriga hoyga waa in la ilaaliyaa. Si habboon u quudin shimbirta. Shimbiraha xanuunku waxay ka soocaan kuwa kale.
Chicks waxay u nugul yihiin cudurkan.
Calaamadaha cudurku waa: Shuban muddo dheer. Muuqaalka suuxdinta. Chicks xanuunku waa qabow.
Nasiib darro, ma jirto daaweyn cudurkan.
Ka hortagga cudurkan, kiniiniga digaaga ayaa loo isticmaalaa. Markaasaa digaagga waxaa la waraabiyaa xal daciif ah oo ah kaneecada.
Cudurku waa mid halis ah. Caabuqnimada shimbiraha waxay ku dhacdaa cunto iyo biyo.
Astaamaha waxaa ka mid ah calaamadaha soo socda: dhaqdhaqaaq la'aanta iyo niyadjabka shimbirta, guluubku wuu furan yahay wakhti kasta, baalashu dhicid, baalasha wadajir ah.
Wixii daaweyn ah ee xal loo adeegsaday tricholop. Shimbiruhu waxay u baahan yihiin inay ku quudiyaan.
Ka hortagga waxaad u baahan tahay inaad si habboon u ilaaliso shimbirta. Sidoo kale soo iibso cunto wanaagsan oo la xaqiijiyay.
Waa maxay cudurada cudurada fungal?
Cudurrada fangasku maaha kuwo aad u ba'an sida infekshanka, laakiin waa inay sidoo kale la tacaalaan.
Waa cudur faafa oo is-qaadsiintu waxay dhacdaa xiriir shimbir. Kuwa ugu khatarsan ee cudurada fungal waxay keeni kartaa dhimasho.
Inta badan cudurrada fangasku waxay u eg yihiin qolal wasakh ah. Fungi si dhakhso ah ayuu u faafaa. Hoos waxaa ku qoran liiska yar ee cudurrada noocaas ah.
Waa mid ka mid ah cudurrada fungal ee ugu khatarsan, taas oo dhimasho ah. Sida caadiga ah digaagga qaangaarka ah waa jirran yihiin.
Maqaarka, baalasha iyo xubnaha gudaha ayaa la saameeyaa.
Calaamadaha cudurku waa: qaababka jaallaha waxay ku muuqdaan godka iyo hilibka.
Shimbiraha way neefsanayaan. Tufaax ayaa dhacaya. Miisaanka culus iyo saxaro dabacsan.
Si loo daaweeyo shimbir macquul maaha.
Ka hortagga wuxuu ka kooban yahay nafaqo wanaagsan iyo nadiif nadiif ah.
Cudurkani wuxuu saameeyaa habka neefsashada.
Calaamadaha cudurku waxaa ka mid ah: lakulanka iyo daciifnimada shimbirta. Beak iyo ciddiyaha ayaa noqda buluug. Tufaax ayaa dhacaya.
Xajka shimbiraha, hindhisto marka neefsashada. Dareeraha dareerka dhiigga. Muuqaalka muuqaalka xabadka sanka.
Sida daaweynta, xalka loo yaqaan 'vitriol buluug' waxaa loo isticmaalaa laba maalmood.
Sida qiyaasta ka hortagga ah, waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso qolka oo aad ku darto fitamiinada cuntada.
Maxaa ku saabsan cudurrada faafa ee shimbiraha?
Cuduradan waxaa sababa by dulin. Waa cudur faafa. Waxaan ka sheekeyn doonaa qaar ka mid ah.
Amidostomosis. Cudurku wuxuu muujinayaa luminta caloosha. Maaha khatar aad u daran haddii aad bilowdo daweyn waqtigaas.
Astaamaha waxaa ka mid ah: xaalad ba'an oo shimbir ah, korodh miisaan la'aan, cunto xumo la'aan.
Daaweynta, waxaad isticmaali kartaa isticmaalka kaarboonka tetrachloride ama piperazine.
Sida ka hortagga, waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso coop digaaga, iyo sidoo kale raaca raashinka.
Xaaladdan, mindhicirrada ayaa saameeya tani waxay sabab u tahay cunto xumo.
Astaamaha waxaa ka mid ah: lulmoodka iyo niyadjabka, cunnooyinka lumitaanka, cabbitaanka culus, daal.
Daaweyntu waa in la sameeyaa marxaladda hore, ama ka dib waxay noqon doontaa goor dambe. Daaweyntu waxay u isticmaashaa daawada phenothiazine, iyo sidoo kale nafaqada haboon.
Iyadoo loo yaqaan 'prophylaxis', ka saarista adhiga shimbiraha ay saameeyeen waa la fuliyaa. Nadiifinta guriga guriga. Sidoo kale si looga hortago dhacdada cudurka waxaad u baahan tahay inaad cuno shimbiraha si habboon oo u ilaaliso nadiifinta qolka.
Calaamadaha cudurkan ayaa saameeya mareenka neef-mareenka, sanbabada iyo trachea.
Cudurku wuxuu leeyahay astaamaha soo socda: sababtoo ah cunto xumo, miisaan lumis ah, iyo mararka qaarkood xiiqlayntu inta lagu jiro neefsashada.
Isticmaalka iodine waxay ku habboon tahay daaweyn.
Wixii ka hortag ah, waa inaad u hoggaansamaan dhammaan heerarka digaaga. Nadiifinta guriga.
Marka uu cudurkani dhaco, dirxiga ayaa ka muuqda xiidmaha shimbirta. Laakiin si fudud ayaa loo daaweyn karaa.
Astaamaha waxaa ka mid ah: cunto xumo, miisaan lumis, dhaqdhaqaaqa shimbir yar. Qaybinta ukumaha ayaa joojiya. Xannibaadda maskaxda. Mararka qaarkood muuqaalka suuxdinta.
Inta lagu jiro daaweynta, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo hygromycin B, tetrachloride-ga iyo finothiazine.
Sida qiyaasta ka hortagga, waa lagama maarmaan in la nadiifiyo qolka, waa in la ilaaliyo heerarka nafaqada iyo digaagga.
Waxay calaamad u tahay muuqaalka muuqaalka leh ee looxyo.
Calaamadaha cudurku waa: cunto xumo, miisaan lumis, gaajo.
Daaweyn adigoo isticmaalaya qandaraaska daroogada.
Iyo ka hortagga cudurka waxaad u baahan tahay inaad u hogaansanto nafaqada habboon.
Cudurkan waxaa lagu arkay muuqaalka kalluunka ee ku yaal shimbiraha.
Astaamaha waxaa ka mid ah: xummad, shuban. Isku darka shimbirta daboolka. Marmarka qaarkood curyaanku wuxuu dhacaa.
Daaweynta cudurka, daroogooyinka soo socda waxaa loo isticmaalaa sida finsal, microsal. Garlic waa mid aad waxtar u leh, waxaad sidoo kale ku dari kartaa abuurka bocorka shimbirta.
Si looga hortago, waa inaad u hogaansantaa nafaqada haboon ee shimbirta. Haddii uu dhinto, jirka waa in la gubaa.
Qaybta beerka iyo caleemaha ayaa la saameeyaa.
Astaamaha waxaa ka mid ah xaalad liidata shimbirta, rabitaanka cuntada, madaxa buluuga ah iyo baalalka ruxda.
Daaweynta waa in lagu sameeyaa furazolidone. Sidoo kale ku dar fiitamiinada cuntada.
Sida ka hortagga, waxaad u baahan tahay inaad ku darto vitamin A.
Cudurkani wuxuu daboolayaa mindhicirka.
Astaamaha waxaa ka mid ah kuwan soo socda: muuqaalka saxarada dareeraha ah, caloosha. Mararka qaarkood waxaa jira casiraad.
Daaweynta waxaa lagu sameeyaa daawooyinka sida kamala, frilixan ama arecoline.
Ujeedooyinka ka hortagga, waa lagama maarmaan in la cuno shimbiraha si sax ah oo loo daboolo tallaabooyinka dayactirka ee loo baahan yahay.
Cudur ka dhasha ukunta oo aan lahayn qolof
Cudurku waa mid faafa, oo muujinaya naxdinta naxdinta leh ee jidhka shimbirta.
Astaamaha waxaa ka mid ah arrimahan soo socda: shimbirku waa jilicsanaan la'aan, jilciso ukunta oo aan lahayn qolof. Xayawaanku way ruxeen. Cesspool ayaa barara.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo tetrachloride-ka kaarboonka, iyo hexachloroethane ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa.
Ka hortagga waxay u baahan tahay guryaha digaaga ee habboon iyo nadiifinta.
Waxaa jira cayayaanka yaryar ee adduunka oo dhan sida boodhka cunta ee waxyeelleyn kara digaaga.